Kusvirana neMurume weBusiness Partner Yangu – Beche rakakweshwa ipapo - Masasi eHarare
DzeBonde Kusvirana neMurume weBusiness Partner Yangu – Beche rakakweshwa ipapo
Kusvirana neMurume weBusiness Partner Yangu – Beche rakakweshwa ipapo
Ndainge ndine 31 years, a lawyer driving BMW X6 chandainge ndisina murume kana boyfriend zvayo.
My business partner ainge akaroorwa ane vana 2 and we were close ndaive godmother wevana vake.Ndaiti kana vakaenda kuholiday sefamily ndaingoendawo navo but ndaigara ndichishuwira kuti one day ndaiendawo out nefamily yangu. Anele my friend aigara achindishainira achiti murume wake anezimboro zihombe zvekuti dzimwe nguva aitoita mabruises apedza kusvirwa.Hapana asingadi zvakanaka and I used kuzvibatabata hangu imagining zimboro raKells richindisvira. Anele akabva a cheater on murume and she confided in me apa achiti akaita mistake and she regrets it. Ndakangoti this is now my chance.
Ndakafunga plan and lied to my friend apa ndainge ndadaidza Kells kumba kwangu ndamuti I need his help kuti andiisa maDstv connections ainge abva time yandaicleaner mumba. Kells akauya akasvika ndabika his favourite meal and had bought his favourite whisky ko info yese ndainge ndinayo ndakapihwa naAnele since ainge asingazive kuti one day ndichamubira murume wake.”Inwai kani babamudiki”mudye ” that’s me being Lexi nekavoice karipasi kanongoita seduce murume.Pasina nguva munhu ainge adhakwa akusagona kufunga zviri straight inini ndakatanga imagining hangu achindisvira, ndakagara pamberi pake ndikatanga kuzvibata matinji kuti oone beche rangu, ndaive ndatokuvara zvangu kare nezemo. Matinji aive aita kuzvimba aya, minyatso yaive yachiti twii kumira nekakuvavirira ndakatanga kumutsvoda wanike munhu is responding ndikati yes zvangu zvaita.
Ndakati ndichinobata the famous muzvambarara wemboro yake kudai wanike hezvo, mukadzi wake aitaura chokwadi. It was big and yainge yamira kare iri kuchema tumisodzi tuya twunotanga kubuda kana murume akunzwa nekuda beche. Mboro yaiita kuvhita vhita ichiita seinofema. Paakati bengenu bamnini vakanosverera zvigunwe zvavo pamatinji angu kudai ndakabva ndatanga kuimbirira maiwe kani, maiwe kani, mai maiwevkani. Ipapo ndaive ndatota beche rese. Akati zvigumwe zviviri bvoo mukati mebeche, iweka iwe! Ndakanakirwa. Akatanga kundisvira nazvo zvigumwe. Ndainge ndongoshaker nekukoira iye achiti akapinza obudisa, akapinza obudisa, akapinza onanzva. Maiwe kani kunaka kunge mboro yaiye Kells yandaigara ndifunga ichindisvira and this time zvainge zvakuitika.Akazongoti pabhinzi one two kukwiza ndiye maiweeeee kutunda kuita weti chaiyo I am sure nezvemakore ose andikapedzisira kusvirwa.
Akachitanga kuyamwa mazamu angu kunge kamwana kacheche kanonokerwa nemukaka. Aiita zvekusveta chaiko. At this point rume rakange rofemeruka mudenga kunge munhu abva kumhanya 5km. Akandisundudzira pamudhedha zvine simba, zvino mboro iya yainge yashatirwa. Kuzondidaro. Haikona kudaro munhu ane game plan mhani! Ndakabva ndarivhura gumbo 180 degrees zvino kuti achinyatsopinda. Akauya pamusoro pangu ndokuti ‘vhurai maiguru ndoda kupinda. Asi maiguruka nhasi muchazviona’ Ipapo ainge abata mazigaro angu nemaoko ese kudai achinyatsovhura makumbo. Ndakabata mboro yake ndokuiti zvishoma pamuromo webeche apa ndokubva ndaibudisa.Ndakati ndazvidenhera.. ‘ isa isa isai kani maiguru maiwe kani.’ Ndakaisa mboro yese mubeche ndakanyatsonzwa ichidzika kusvika kuchibereko uku, akachitanga kukoira zvino babamudiki uye. Akaiti akati koikoi ombomira koikoi omira ndofunga achikoka simba. Ini zvino mhata ndaive ndamisa mudenga ndichirova chikapa chaicho.Matinji angu anga oonererwa oita kunge mapapiro .
Taisvikosangana pakati in rhythm iye achikoira ini ndichipepeta ndiri pasi. Sweat manje amai taive toerera kunge vanhu vabuda murwizi. Beche rakakweshwa ipapo. Pandakazoti pepetai zvishoma kuitira kuti mboro inyatsopinda ndopandakanzwa mhere murume achitunda kuti tsaaa tsaaa. Ndakabva ndanzwa kupisa kwehuronyo hwake iniwo ndichibva ndatongotundawo. Takabva tangoti rabada ndokurara mboro irimo, ndikamuka irimo.The whole weekend he spent at my house with his phone on voicemail. I blame shamwari yangu she used to go on and on nezimboro remurume wake now ava wangu tane mwana one and we are not partners kubasa ne Ex yaKells.
Kusvirana neMurume weBusiness Partner Yangu